20 October 2009 – အတ္တကျော်ရဲ့ စာပေါင်းစုံ
လေဆိပ်ထဲမှာတင် ရထားလေးတစ်စီးက ရပ်နေတယ်။ နောက်ထပ် ရထားလမ်းတစ်ခုမှာ ကျွန်တော်တို့ စောင့်နေရတယ်။ ကျွန်တော့်မိတ်ဆွေက သည်ခရီးကို အရင်က နှစ်ခေါက်၊ သုံးခေါက်ရောက်ဖူးတော့ ကျွန်တော်လည်း တောင်တောင်အီအီ သိပ်စဉ်းစားစရာမလိုဘဲ သူ ဦးဆောင်တဲ့နောက် အသာလေး လိုက်နေလိုက်တော့တာပါ။
ခဏအကြာမှာတော့ ချစ်စရာ ရထားလေး ရောက်လာပါတော့တယ်။ အဲဒီ့ရထားလေးပေါ်ကို တက်လိုက်ကြပြီးတဲ့နောက် များမကြာခင်မှာ ရထား တံခါးတွေက အလိုအလျောက်ပိတ်သွားပြီး ရထားလည်း ထွက်ခွာပြန်ပါတော့တယ်။သိပ်တောင် မစီးလိုက်ရဘူး၊ တစ်နေရာမှာ ရပ်သွားပြီး တံခါးတွေ ပြန်ပွင့်လာတာမို့ တခြား ခရီးသည်များနည်းတူ ကျွန်တော်တို့လည်း အပြင် ထွက်လိုက်ကြတယ်။ လေဆိပ်ထဲမှာပဲ ရှိသေးမှန်း အမှတ်အသားတွေ၊ စာတန်းတွေအရ သိသာလို့နေတယ်။ ကျွန်တော်တို့က အခုမှ ဆိုက်ရောက် ဆောင်ထဲ ရောက်လာတာလေ။
ကျွန်တော်ယူလာတဲ့ အဝတ်အစားသေတ္တာက နည်းနည်းကြီးနေတဲ့ အတွက် ရန်ကုန်ကထွက်ကတည်းက လေဆိပ်မှာ တန်ဆာလုပ်ပြီး အပ်ခဲ့ရ တာ ဆိုတော့ လေဆိပ်ခန်းမဆောင်ထဲမှာ ကျွန်တော့်သေတ္တာကို ပြန်ရွေးဖို့ စောင့်နေရသေးတယ်။ အဲဒါကျတော့ ကျွန်တော့်မိတ်ဆွေက သိပ်စိတ်ရှည်ပုံ မရဘူး။
“ကျုပ်က ခရီးသွားရင် ဝန်ကျဉ်းကျဉ်းနဲ့ ကိုယ်နဲ့ တစ်ပါတည်း သယ်လို့ အိတ်အရွယ်အစားကို တမင်ရွေးထားတာဗျ။ အခုလို စောင့်မနေရ အောင်ပေါ့” လို့ ပြောနေပေသေးတယ်။
မစောင့်ချင်လည်း စောင့်ရမှာပဲ ကိုယ့်ဆရာ။ ကျွန်တော်လည်း အဲလို စောင့်ရတာကို သိပ်တော့ မကြိုက်လှဘူး။ သို့ပေမယ့် တစ်ပတ်ကြီးများတောင် နေရမှာဆိုတော့ အဝတ်အစားက အနည်းဆုံးတော့ ခုနစ်စုံလိုတယ်လေ။ ပြီးတော့ ရောက်တုန်းရောက်ခိုက် ဝယ်ချင်တာလေးတွေ ဝယ် ဖြစ်ခဲ့ရင်လည်း ထည့်ရသိုရအောင် အိတ်ကို တမင်ကြီးကြီးသယ်ခဲ့ရတာ ကလား။
သို့ပေမယ့် သိပ်ကြာကြာ မစောင့်လိုက်ရပါဘူး။ လည်ပတ်နေတဲ့ စောင်းလျှော သားရေပတ်ပြင်ကြီးတစ်ခုပေါ်မှာ ကျွန်တော့်သေတ္တာကို တွေ့လိုက်ရ ပါတယ်။ (တံတားဦးလေဆိပ်မှာ အဲဒါမျိုး အခုရှိနေပါပြီ။ တန်ဆာ လုပ်ပြီး တင်လာတဲ့ ခရီးသည်တွေရဲ့ ဝန်စည်စလယ်ကို လေယာဉ်ပေါ်က ချလာ၊ ပြီးတော့ စက်ထဲ တစ်ခုစီထည့်ပေးလိုက်ရင် စက်ကနေ ပစ္စည်း ရွေးတဲ့နေရာဆီကို တွန်းတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အဲဒီ့ပစ္စည်းတွေကို လည် ပတ်နေတဲ့ စောင်းလျှော သားရေပတ်ပြင်ညီကြီးတစ်ခုပေါ်မှာ ကိုယ့်ပစ္စည်း ကိုယ့်ဘာသာ ရွေးချယ်ပြီးကောက် ယူသွားရတာမျိုးပါ။) အဲဒါပြီးတော့ လူဝင်မှု ကြီးကြပ်ရေးကောင်တာကို ဝင်ရပါတယ်။
ကျွန်တော် ဝင်လိုက်တဲ့ လူဝင်မှုကောင်တာမှာတော့ တာဝန်ကျက အမျိုးသမီးဖြစ်နေတယ်။ကျွန်တော်လည်း ကျွန်တော့်ရဲ့ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကို ထုတ်ပေးလိုက်တယ်။ကျွန်တော် နိုင်ငံခြားခရီးကို ပထမဆုံး သွားခွင့်ရတော့မယ်ဆိုတာ သိထားသူ၊ ကျွန်တော် ငယ်သူငယ်ချင်းလို့ ပြောလို့ရတဲ့ အမေရိကန် မိတ်ဆွေက ကျွန်တော့်ကို နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ထည့်လို့ရတဲ့ သားရေဖုံးအစွပ်ကလေး တစ်ခု လက်ဆောင်ပေးထားတယ်။ အဲဒါနဲ့ ကျွန်တော့်နိုင်ငံကူး လက်မှတ်လေးဟာ သားရေဖုံးလေးနဲ့ သပ်သပ်ရပ်ရပ်ပေါ့။
ဖြစ်ချင်တော့ အဲသလို အဖုံးနဲ့ဆိုတော့ ဟို လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးက ဆရာမကြီးခမျာ ကျွန်တော် ဘယ်နိုင်ငံက လာမှန်းတန်းမသိနိုင်ဘူးဖြစ်နေ ရှာတယ်။ သူက ကျွန်တော့်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကို အမြီးပြန်ခေါင်းပြန် ကြည့်နေတယ်။ မလေးရှားနိုင်ငံ ပြည်ဝင်ခွင့်ကိုတော့ ရန်ကုန်က မလေးရှား သံရုံးမှာကတည်းက တံဆိပ်တုံးရိုက်လာခဲ့တာမို့ သူတွေ့တယ်။ သို့ပေမယ့် ကျွန်တော် ဘာကောင်လဲဆိုတာ သူ ရုတ်တရက်မသိဘူး။
သို့ပေမယ့် သိဖို့က သိပ်မခက်ပါဘူး။ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရဲ့ ရှေ့ပိုင်း စာမျက်နှာတွေကို လှန်ကြည့်လိုက်ရင် တန်းတွေ့နိုင်ပါတယ်။
ကျွန်တော့်ဓာတ်ပုံပါ စာမျက်နှာမှာတော့ ကျွန်တော် ဘာလူမျိုးဆိုတာ တောင် အတိအလင်းရေးထားပါတယ်။ အဲဒီ့မှာတင် မမရဲ့ နှုတ်က တစ်ခွန်းထွက်လာတယ်။
မြန်မာကို myanmar လို့ ကျွန်တော်တို့က စာလုံးပေါင်းထားပြီး ကျွန်တော်တို့ဘာသာ ဖတ်တဲ့အခါ မြန်မာလို့ အသံထွက်ပေမယ့် မြန်မာ စကားမတတ်တဲ့ သူ ဖတ်တဲ့အခါ မိုင်အဲ(န်)မားလို့ပဲ ထွက်ကြပါတယ်။ ဝင်းဦးကို “ဝင်းနူး”လို့ ဖတ်ကြသလို၊ သန်းကျော်ကို “သှယ်(န်) ခိုင်အော်”လို့ ဖတ်ကြသလိုပါပဲ။
သူက အဲသလို မပီမသ ရွတ်လိုက်ပေမယ့် သူပြောချင်တဲ့ စကားရဲ့ အနက်အဓိပ္ပာယ်ကို ကျွန်တော် တန်းသိလိုက်ပါတယ်။ သူ့စကားအသွားအလာက “လာပြန်ပြီ တစ်ယောက်” ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်ပါ။ ကျွန်တော့်ပါးစပ်ကလည်း အဲဒါမျိုးကျ ငြိမ်မနေတတ်ဘူး။
“ဆိုး ဝပ်(ထ်)” ဆိုပြီး ခပ်တင်းတင်းပဲ ပြောလိုက်မိရပါတယ်။ အဲတော့ ဘာဖြစ်သေးတုံးဆိုတဲ့အနက်မျိုးနဲ့ သူ့ကို အထက်စီးက ပြောချလိုက်တာပါ။
အဲတော့မှ မမက တံဆိပ်တုံးကို ထုလိုက်ပြီး သူ့အလုပ်သူ ရိုရိုသေသေ ဆက်လုပ်ပါတော့တယ်။ ကျွန်တော့်နားထဲမှာတော့ သူ့ရဲ့ “အိုး… မိုင်အဲ(န်)မား” ဆိုတာကြီးက အတော့်ကို အနှောင့်အယှက်ပေးနေတုန်းပဲ။ မိန်းမနဲ့ ယောကျာ်းဖြစ်နေလို့ တစ်ကြောင်း၊ ကိုယ်တစ်ခါမှ မရောက်ဖူးသေးတဲ့ သူ့တိုင်းပြည်မှာ ရောက်နေတာမို့တစ်ကြောင်းသာ အောင့်နေရတယ်။ မဟုတ်ရင် ကျွန်တော် အဲဒီ့နားမှာတင် သူ့ကို ပြဿနာရှာမိသွားမလား မသိဘူး။
မိုင်အဲ(န်)မားကြီး ကျွန်တော်တစ်ယောက်တော့ မလေးလေဆိပ်က လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးကောင်တာကို အောင်မြင်စွာ ကျော်ဖြတ်ခဲ့ပါပြီ။
olu tJovdk ryDro &Gwfvdkufayr,fh olajymcsifwJh pum;&JU teuft”dyÜm,fudk uRefawmf wef;odvdkufygw,f/
olYpum;toGm;tvmu ]vmjyefNyD wpfa,muf}qdkwJh t”dyÜm,f yg/
uRefawmfhyg;pyfuvnf; tJ’grsdK;us Nidrfraewwfbl;/
]qdk; 0yf(xf)}qdkNyD; cyfwif;wif;yJ ajymvdkufrd&ygw,f/ tJawmh bmjzpfao;wHk;qdkwJhteufrsdK;eJY olYudk txufpD;u ajymcsvdkufwmyg/
tJawmhrS rru wHqdyfwHk;udk xkvdkufNyD; olYtvkyfol ½dk½dkaoao qufvkyfygawmhw,f/
uRefawmfhem;xJrSmawmh olY&JU ]tdk;… rdkiftJ(ef)rm;µ}qdkwmBuD;u tawmfhudk taESmifht,Sufay;aewkef;yJ/ rdef;reJY a,mufsm;jzpfaevdkY wpfaMumif;? udk,fwpfcgrS ra&mufzl;ao;wJh olYwdkif;jynfrSm a&muf aewmrdkYwpfaMumif;om atmifhae&w,f/ r[kwf&if uRefawmf tJ’Dh em;rSmwif olYudk jyóem&SmrdoGm;rvm; rodbl;/
rdkiftJ(ef)rm;BuD; uRefawmfwpfa,mufawmh rav;avqdyfu vl0ifrIBuD;Muyfa&;aumifwmudk atmifjrifpGm ausmfjzwfcJhygNyD/
Author lettwebawPosted on 20 October 2009 26 October 2009 Categories Excerpts, Reproduction1 Comment on So What ???